Ny fiaramanidina dia manohitra raha miova ny fomba fijeriko. Inona no tokony hataoko ? (FSX) - Rikoooo
Ny fiaramanidina nitontontontona rehefa hiova ny fomba fijery. Inona no tokony hataoko ? (FSX)
Ny sasany ny fiaramanidina Aza kivy amin'ny Lalantara, ary ny toy izany nitranga ny fiara manodidina; izany no ho fantatra bibikely, izay mety ho voavaha amin'ny alalan'ny manova ny «Fanapahan-kevitra harato» ho 5m ambony indrindra. Ao amin'ny Asehoy ny randram-FSX, tsindrio eo amin'ny «Scenery» kiheba sy hanova ny fanapahan-kevitra araka ny aseho eto ambany: